'V'House', ~ igumbi eliphantsi kwindlu ekwabelwana ngayo
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguD'Ellen
Isihombiso okanye 'V'House' (isihloko sokusebenza) sisandul'ukuqalisa, yindlu yokulala emithathu, indlu enkulu ekhitshini esembindini wedolophu yeLake Charles. Abagcini 2 bahlala apha, banamagumbi abo kwaye basebenza kwipropathi. Kukho ukufikelela kwiibhayisekile ukusuka kumnyango olandelayo kwiNdlu eqhelekileyo kwaye kukuhambo lwemizuzu emi-3 ukuya echibini. Iigrosari ziyimayile ezantsi, kunye nebhulorho ye-I10 emantla ethu.
Igumbi lakho liphakathi kwicala elingasezantsi lendlu, kufutshane negumbi lokuhlambela; ineyunithi yayo yefestile ye-ac kunye nobushushu obuphakathi ebusika. Ibhaskithi yempahla ikwigumbi lokuhlambela, kwishelufa esezantsi, ukuze kuhlanjwe iilinen. Kwimpahla yakho yokuhlamba, iBow Tie kwisitrato esiBanzi ziibhloko ezimbalwa; ILizwe lokuhlamba impahla yi-4mi. kude; enkulu yokuhlamba-mat! nazo ziyakuhlamba zomile & usonge; vele uyibeke kusasa kwaye uyithathe ngokuhlwa!
Ukuhlala edolophini kuyamangalisa. Kufuphi neendawo zokutyela, ivenkile yekofu, iziko le-yoga kunye nendawo ephambi kwechibi-ilula kwaye iyimbali, indawo entle kakhulu yokuhamba ebumelwaneni.
Umbuki zindwendwe ngu- D'Ellen
Abakhathaleli banobuhlobo kwaye baxakekile kodwa basoloko benexesha lokuncokola okanye lokunceda ngolwazi lwasekuhlaleni nam ndiyakwenza njalo. Ungalibazisi ukubhala, okanye usitsalele umnxeba ukuba unomcimbi okanye imibuzo.